Ndepụta nke ikikere ikwubiga okwu ókè anyị na-enye WhatsApp | Gam akporosis
A na-ahapụ WhatsApp ime ihe ọ bụla na-enweghị nkwenye anyị
Na-ele anya na ikike ị chọrọ ọhụrụ ukara update nke senseshional ngwa ngwa ngwa ngwa Whatsapp, M na-aghọta otú nkwenye dị gị mkpa na ihe fọrọ nke anyị okay to do and undo as i masiri gi na-enweghị anyị ọbụna hụrụ.
Mu onwem onwe m bu onye kwesiri ntukwasi obi Whatsapp echem na obu ngwa kachasị mma nke ụdị, Aghọtaghị m ihe kpatara oke ikikere a ji bụrụ, gụnyere ụfọdụ nke m na-enweghị ike ịghọta.
N'etiti ka njọ ikikere na m nwere ike na-edebe, e nwere ndị nke poser kpọọ ekwentị na-enweghị nkwenye anyị ma ọ bụ ikike ịme ma ọ bụ ọbụlagodi nata ozi ederede nke ụdị SMS.
Ngwa a ọ dị mkpa ịnweta ụdị nhọrọ a site na ọdụ anyị? Nhọrọ ndị dị ka inwe ike ịkpọ na uche gị na nọmba ekwentị na-enweghị nkwenye anyị doro anya ma ọ bụ dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ zipu SMS ka a na-akpọ na-ezighi ezi Ọrụ adịchaghị na emesia ha kụrụ anyị ụra na ụgwọ ekwentị.
Ewezuga nhọrọ ndị a dị ize ndụ maka ụgwọ ekwentị anyị, achọpụtakwara m na ndị ọzọ na-amachaghị ma dị njọ, ọkachasị gbasara nke anyị nzuzo na mmekọrịta chiri anya ọ pụtara. Nhọrọ dịka iji igwefoto nke ọdụ anyị were foto na vidiyo mgbe obi dị gị mma na mgbe niile na-enweghị mkpa maka nkwenye onye ọrụ ma ọ bụ ike mee ndekọ ọdịyo nakwa na-enweghị nkwenye anyị.
Kedu ka m ga-esi agwa gị, nke a nke ikike na ngwa na gam akporo ha aghaghi ichikwanu ha Google ma gosipụta naanị ndị dị mkpa maka ịrụ ọrụ ziri ezi nke ngwa ahụ dị mkpa.
Na ike anyị nyere ngwa dị ka Whatsapp, ị maara, ewepu data nkeonwe ha na-anakọta banyere anyị, ihe ndị ọzọ ha nwere ike ịnwe. Ndekọ ọdịyo? Foto nke onwe na vidiyo? Eziokwu bụ na naanị ha ga-ama maka na ihe dị adị bụ nke ahụ ikikere iji mee omume ndị a ma ọ bụrụ na anyị nyere gị.
Ozi ndị ọzọ - WhatsApp ruru 400 nde ndị ọrụ n'ụwa nile
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Nche » A na-ahapụ WhatsApp ime ihe ọ bụla na-enweghị nkwenye anyị
Ihe 80 kwuru, hapụ nke gị
Ndewo Francisco, eji m obi m niile kwere na ị nwere ihe na-ezighi ezi. Ngwa ndị ahụ gosipụtara ikikere achọrọ iji rụọ ọrụ ahụ, dịka ị nwere ike ịse foto site na ngwa ahụ ma ọ bụ kpọọ kọntaktị ozugbo, ngwa ahụ chọrọ ikikere ndị a ...
Ekwenyere m na ịrụ ọrụ ndị a ịkwesighi ịnweta ikikere iji mee ha na-enweghị nkwenye gị, ana m ekwusi ike na N’AGBATEGH YOUR IJI kwere gị!.
Echere m na igosipụtala, ntakịrị mmasi n'oge edere.
Ozi ndị ahụ iji "denye aha" na nọmba ekwentị na mobile.
Kpọọ, mgbe ị nọ na nkata ị na-enye menu ma kpọọ.
Ma agaghị m aga n'ihu ...
I nwekwara ike ịnweta ịntanetị! Were ya na o nyere gị ka ị budata 5 gigs dị ka nke ahụ. Nweta usoro faịlụ! Kedu ka ọ ga - esi bụrụ na ha chọrọ ya iji chekwaa foto ma ọ bụ vidiyo anyị na - enweta? Ezigbo ihe ojoo, enwere m olile anya n'ihi amaghị ihe na ọ bụghị n'ihi ịnwa ịgha mkpụrụ maka mgbagwoju anya banyere ngwa a na-amụkarị na saịtị ndị ọzọ.
Banyere otu esi mepụta ngwa, enweghị echiche, nri?
Ọ dị ka nne nne m dere na ọ maghị ihe nke a bụ, ị na-atụ uche ide wasá na ị kpara ya
"Na-enweghị nkwenye gị" pụtara na ọ na-eme ya ozugbo, na-enweghị na-aga site na sistemụ akụrụngwa ọ na-emetụ. Nke ahụ bụ, mgbe ị kpọrọ, ọ naghị eziga gị na ekwentị onye na-akpọ sistemụ arụmọrụ ma na-amanye gị ịpị bọtịnụ ahụ ọzọ, kama ọ na-akpọ ozugbo. Ya mere na ihe ọ bụla ọzọ.
I kpuchiela onwe gị n'ebube ...
Zaghachi Jesús Jiménez
Enwere m olileanya na ị ga-edozi edemede ahụ tupu ọtụtụ ndị mmadụ agụ ya n'ihi na ị toro oke ịbụ onye edemede na-ede banyere android kwa ụbọchị. Nke a na - enye echiche nke etu ọkwa blọgụ dị.
Eji m obi m niile na ị mejọrọ. Ikike ndị ahụ ga-enweta ihe arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnweta ikikere ka ịdekọ ọdịyo, gam akporo agaghị ekwe ka ngwa ahụ nweta ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ikike iji nweta igwefoto, ị gaghị enwe ike ịse foto site na WhatsApp. Ọ pụtaghị na ị na-eme ya mgbe ịchọrọ ma n’enweghị nkwenye anyị.
Manuel Tornos kwuru dijo
Enweghị isi, Francisco. Inyeghi otu ihe na post a. Ihe ọzọ bụ na, m ga-atụle nke ọma ihichapụ ya ozugbo enwere ike (yana m na-ekwu ya). Ikike nke omume ndị a chọrọ ha ka ha rụọ ọrụ ha ma na-enweghị ọrụ ndị ahụ, ngwa ahụ agaghị eji ya ma ọ bụ tato.
Ihe a niile sitere na iro ojoo megide WhatsApp, n'eziokwu. Enwere ike ịkatọ ya maka enweghị ntụkwasị obi, maka ịbụ ụlọ ọrụ gbara ọchịchịrị na nke doro anya, maka Yankee ma ọ bụ maka osote ... mana ihe ị tinyere na post anaghị ejide ya na tweezers.
Zaghachi Manuel Tornos
Ha ha etinyela gị mma ikwu….
Iji malite ịrụrịta ụka banyere ihe niile natara, achọrọ m ịsị na o doro anya na ị ghọtaghị isiokwu ahụ ma ọ bụ na ị na-agụ naanị ihe masịrị gị. M na-ekwughachi na nke m bụ WhatsApp bụ ngwa kachasị mma nke ụdị ahụ yana ihe m kwuru n'isiokwu a achọghị m imebi ya ma ọ bụ kwuo na ọ dị obi ọjọọ, naanị m na-ekwu na site na otu ikikere ndị a ngwa ọjọọ nwere ike ịme na kpughee ihe ha chọrọ na-enweghị onye ọrụ. Nke a bụ ihe nwere ike ime na ọ dị nwute ugbua na ngwa ndị ọzọ yana n'oge ndị ọzọ karịa ka anyị niile ga-achọ.
Na WhatsApp bụ ngwa a na-akwanyere ùgwù, ọ pụtaghị na ọ bụrụ na ha chọrọ iji ihe ùgwù ma ọ bụ ikike ndị a mee ihe n'ụzọ na-ezighị ezi, ha nwere ike ime ya n'ụzọ zuru oke.
Nweghị echiche banyere mmemme, n'ezie ...
Mgbe ị na-eme nke a:
Ebumnuche oku = Ebumnuche ọhụrụ (Intent.ACTION_DIAL);
call.setData (Uri.parse ("tel:" + nọmba));
startActivity (Intent.createChooser (oku, «Họrọ usoro ọkpụkpọ oku:»));
Ọ na-ajụ gị ikike iji kpọọ nọmba ekwentị ozugbo ... Ma site na akara ndị a, naanị ihe ị nwetara bụ na oku na-akpọ oku meghere ... ọ bụghị na ọ na-akpọ na-enweghị ịdọ aka ná ntị ... Ọ bụ eziokwu na ịgbanwe ACTION_DIAL site na ACTION_CALL, na-eme oku na-aga ozugbo, mana iji hụ onye bụ monguer na-etinye na koodu ahụ, n'ihi na ọ na-akọ akụkọ.
ALA, lee ma ị na-ege ndị mmadụ ntị na-agwa gị na ị na-eme onwe gị nzuzu, n'ihi na ha ziri ezi.
Mba, mana ugbua ... are na-ezughị ezi, n'ihi na ACTION_CALL na-arịọ maka ikike n'ihi na ọ na-akpọ oku ozugbo, mana ACTION_DIAL adịghị.
Aga m ekwu ihe niile ndị ọrụ ndị ọzọ kwuru na nkwupụta ahụ. Ihe ederede juru anya. Enwere m olileanya na ha mezie ya ebe ọ bụ na ndị ọrụ na-enweghị uche kwenyere na ya wee mee.
I gosila na ị maghị ihe ị na-aza….
mbụ, ịlele ikike nke ụfọdụ nke ngwa na ị na-ewere mma si play ụlọ ahịa. O nwere ike iju gị anya.
Nke abuo, nye uzo ozo ka enyere gi ikike ichoro idochi nke ugbu a. Iji maa atụ, ikike dị a wouldaa ka ị ga-enye karịa "ịkpọ nọmba ekwentị ozugbo"? I nwekwara ike ịgwa anyị otu anyị nwere ike isi kpọọ kọntaktị ozugbo site na WhatsApp na-enweghị ikike ahụ.
Ma ọ dịkarịa ala, echere m na iji dochie okwu WhatsApp na gam akporo na ederede ga-abụ ihe ịga nke ọma. Ha bụ ikikere ị nwere na android ma ị ga-emegharị ma ọ bụ kpochapụ arụmọrụ.
Banyere ịgbanwe aha ngwa ihe atụ, a bụ m eziokwu zuru oke, enwere m ike iji okwu ahụ Android ma ọ bụ Ngwa Android mana enweghị mgbagha okwu WhatsApp nwere mmetụta na nlebara anya karịa. O doro anya na enwere ike ikwu otu ma ọ bụ njọ karịa banyere ikikere nke ngwa dịka Line, ChatOn, wdg, wdg.
Na nkwanye ùgwù niile n'ụwa, n'ezie, mana isiokwu dị ka nke a belata ọkwa nke blọọgụ, dị ala n'onwe ya, na efu. Francisco, anwala ikwu na nkwupụta ndị ahụ "ị ghọtaghị bla bla ..." ma ọ bụ ihe ka njọ, kwuo ka ihe ọjọọ si dị na "anyị aghọtabeghị ya" (ị kpọrọ anyị ndị nzuzu ma ọ bụ gịnị? ). Ihe ederede adighi nma ma jikwaa ya. Ma ọ bụghị na ị wepu ya ka ị ghara iduhie na mkpu uche na-adịghị, ma ọ bụ bipụta mgbazi, ma karịa ihe niile, akparịla ọgụgụ isi nke onye na-agụ ya na nkọwa.
Amaghị m ebe ị hụrụ ebumnuche m iji kparịa mmadụ, ọ dịghị ihe ọzọ si na eziokwu ma ọ bara uru ikwughachi n'ihu ihe niile.
Ana m eji ohere a ajuju ajuju ndi okacha mara ndi a:
Ọ bụrụ na WhatsApp, Line ma ọ bụ ngwa ọ bụla nwere ikike a niile chọrọ ime ihe ọjọọ, ọ nwere ike ime ya na-enweghị nkwenye doro anya anyị?
Ugbu a ee, Francisco, ị gosipụtara okwu gị. Site na mgbe ị na-ekwu na "maka m WhatsApp bụ ngwa kachasị mma nke ụdị ahụ" ị na-eme ka onwe gị tozuru oke n'ihe ọmụma banyere ụwa nke gam akporo na ngwa ya, ma tinye onwe gị n'ọkwa onye ọrụ dị ala.
WhatsApp bụ a -very-ọjọọ ngwa, ma na ihe ịtụnanya ahịa penetration ọnụego. Ọ dịghị ihe ọzọ. Ma ọ bụrụ na itinyela mgbanwe ụfọdụ n'afọ gara aga (ederede olu, dịka ọmụmaatụ) ịsọ mpi ahụ. Ma n'agbanyeghị nke a, ihe nchekwa nchekwa nke ndị ọrụ tozuru etozu na-arịọ ha na-aga n'ihu na-agba ịlụ ọgụ.
Approachzọ ị nyere ya n'okwu gị (ọ bụ ihe atụ na ngwa) dị mma, mana ọ bụ eziokwu, mana ị ga-agbanwe okwu niile nke isiokwu ahụ site n'isi ruo n'ụkwụ.
adịla ike, echere m na ebumnuche nke isiokwu ahụ dị mma, lelee okwu nke ikike ... ihe na-eme bụ na ekwupụtabeghị ya nke ọma, na anyị ewepụla ya site na nkeji na n'akụkụ ọjọọ. .. ma ọ dịkarịa ala ịbụ gam akporo blog ị nwere ike itinye ihe oyiyi WhatsApp na android ma ọ bụghị na ios.
Cañeros ma, mana nke bụ eziokwu bụ na n'ime blọọgụ, ị kwesiri inwe oge iji kwadebe edemede tupu ịdepụta ya, yabụ, ọ dị ka ọ dị oke njọ na e bipụtara ya na njehie na-acha ọkụ ọkụ na n'elu nke na ọ naghị a attentiona ntị na-ekwu na ụkpụrụ adịghị ka ọ na-emebi ihe ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe na-ewuli elu iji mee ọkwa kacha mma.
Na mgbakwunye na nkọwa ndị a niile mara mma, ihe niile edemede ahụ kwuru bụ eziokwu.
Ihe omume a choro ikike niile iji mee ihe ọ na-enye peeeeero ...
you nwekwara ike ime (n'oge ọ bụla) ihe isiokwu ahụ na-ekwu:
- Dekọọ vidiyo, foto na ọdịyo.
- Gụọ, detuo, jiri ma ọ bụ zipu ndepụta kọntaktị na data ha niile n'ịntanetị.
- Kpọọ ma zipụ SMS na saịtị ọ bụla.
- Zipu faịlụ ọ bụla site na ekwentị na ịntanetị.
- Na ọtụtụ ndị ọzọ doggies.
O di nwute, enwere otutu mmemme na-acho otutu ikike ma anyi agaghi amachi ha ... n’enweghi mgbọrọgwụ.
Zaghachi na androllo
"Ọ bụrụ na WhatsApp, Line ma ọ bụ ngwa ọ bụla nwere ikikere ndị a chọrọ ime ihe ọjọọ, ọ nwere ike ịme ya na-enweghị nkwenye doro anya anyị?" Ee, anyị na-agwa gị, mana edemede gị anaghị ekwu maka "ihe egwu nke ikikere ngwa na gam akporo" mana maka "ndepụta nke ikikere ikwubiga okwu ókè anyị na-enye WhatsApp". Tee ya agba ọ bụla ịchọrọ, mana ọ bụ mmejọ site na mbido.
Site n'ụzọ, njikwa ikike gam akporo adịghị mma ma gịnị banyere njikwa ikike iOS? (Ọ bụ a ezi obi ajụjụ, si ngụkọta amaghị ihe nke iOS).
"WhatsApp nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ mmetụta na ntị"
You na-ebute mmetụta karịa eziokwu nke akụkọ ahụ? Nke ahụ nwere aha: pịa edo edo.
"Ọ bụrụ na WhatsApp, Line ma ọ bụ ngwa ọ bụla nwere ikikere ndị a chọrọ ime ihe ọjọọ, ọ nwere ike ịme ya na-enweghị nkwenye doro anya anyị?"
Onye ọ bụla maara na nchebe na android adịghị ike ... dịka windo na sistemụ ndị ọzọ ...
M na-ekwusi ike, isiokwu ahụ nwere ike inwe uche ma ọ bụrụ na ị gbanwee WhatsApp maka gam akporo, mana n'ezie "WhatsApp nwere mmetụta na nlebara anya karịa."
O doro anya, ngwa ọ bụla nwere ikikere, nwere ike iji ikike ahụ mee ihe n'ụzọ ziri ezi, ma ọ bụ jiri obi ọjọọ. Ajuju ajuju bu “aha” nke onye mmepe / ulo oru a nwere ike inwe, itukwasi gi obi ma o bughi. Nwere ike inye nne gị mkpịsị ugodi nke ụlọ gị, na junkie dị n'akụkụ nkuku, ọ gaghịkwa abụ na nne gị ga-ezu ụlọ gị, mana inwe ike ime nke a, ọ nwere ike.
Kwuru na edemede gị:
"Mụ onwe m bụ onye ọrụ kwesịrị ntụkwasị obi nke WhatsApp ma echere m na ọ bụ ngwa kachasị mma nke ụdị ahụ, anaghị m aghọta ihe kpatara oke ikikere a ruru, gụnyere ụfọdụ nke m na-enweghị ike ịghọta"
- >>>>>> Jụọ ndị na-aghọtaghị na anyị na-akọwara gị ha
"Ngwa a ọ dị mkpa inwe ụdị ụdị nhọrọ a site na ọdụ anyị?"
- >>>>>> Ee, ọ bụrụ na ịchọrọ ịkpọ site na WhatsApp, nke m hụrụ nke ọma, ịchọrọ ikikere oku. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịdebanye aha, SMS. Ọ bụrụ n’ịchọrọ izipu foto, otu iji nweta igwefoto. Needkwesịrị ịnweta usoro faịlụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ izipu vidiyo ma ọ bụ foto ederelarị na ọdụ gị. Igwe okwu, iji zipu ihe edeturu ... ogologo wdg.
Dị ka m na-agwa gị, nke a nke ikikere na ngwa ndị dị na gam akporo ga-enwerịrị Google na-achịkwa ya naanị na ọ ga-eme ka ndị dị ezigbo mkpa maka ọrụ ziri ezi nke ngwa ahụ dị mkpa.
- >>>>>> Google enweghị ike ijikwa ikike, n'ihi na ha bụ ikikere, ọ bụ gị ga-achịkwa ha. Enweghi "ikikere niile Google kwesịrị ijikwa" na ị na - aza, WhatsApp ga - abụ nkata ederede, oge. Ọ́ gaghị ama gị mma ọzọ?
«Site na ikike ndị anyị nyere na ngwa dị ka WhatsApp, ị maara, na-ewepu data nkeonwe ha na-anakọta banyere anyị, ihe ndị ọzọ ha nwere ike ịnwe. Ndekọ ọdịyo? Foto nke onwe na vidiyo? Eziokwu bụ na naanị ha ga-ama maka na ihe dị adị bụ na enyerela ikike ime ihe ndị a »
- >>>>>> Alert! Amarillismo na conspiranoia !!!
Ka o sina dị, Agaghị m agwa gị ihe ọ bụla na ndị ọrụ ibe gị ọzọ agwabeghị gị mbụ, mana isiokwu dị ka ọ dị ọcha. Ndị anyị nwere echiche ụfọdụ na-enweta ya na ahịrịokwu nke anọ, na ndị na-enweghị echiche, ị na-agbagha ha n'enweghị ihe kpatara ya. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịrụ ọrụ na edemede nchekwa na gam akporo, ị nwere ọtụtụ ihe, mana ihe ị mejọrọ anaghị arụ ọrụ ọbụlagodi blọọgụ Apple-fan na-akpụ akpụ.
Idozi amamihe dị na ya, ọ bụ ezie na dịka usoro ị zara azịza gị, ọ na-enye m ka anyị ka mma ịnọdụ n'oche.
Zaghachi Alvaro M
Coper Idozi dijo
Iji lee isiokwu ahụ, ọ bụghị na ọ na-ekwu ihe ọ bụla ụgha, mana na m chere na ọ bụ ihe mkpu. Ọ bụ eziokwu na WhatsApp na-arịọ maka ọtụtụ ikikere mana ọ bụ na-enweghị ha ọtụtụ n'ime mgbakwunye ya agaghị arụ ọrụ, dị ka izipu ozi edepụtara ma ọ bụ ịkpọ site na profaịlụ onye ọrụ.
Ọtụtụ n'ime unu na-arịọ onye edemede ka ihichapụ post mgbe kpomkwem na ire ọkụ ị na-enweta ndị na-abụghị, na ndị ọbịa na-akpali ya mere nọrọ ebe a na isi gị dị elu.
Zaghachi Coper Idozi
Coper Idozi. Say na-ekwu "eziokwu na WA na-arịọ maka oke ikikere mana ọ bụ na enweghị ha ha agaghị arụ ọrụ ..." Hà dị ọtụtụ? Ma obu ha bu ndi ichoro? Ọ bụrụ na ịchọrọ ha, ha dị mma, ọ bụrụ na ị rịọrọ maka ịnweta okwuntughe Wi-Fi, n'ezie nke ahụ ga-abụ nke ukwuu, mana iji nweta (ma chekwaa) onyonyo na vidiyo ahụ, ị ​​ga-edekọ ha n'otu ebe. .. M na-ekwu nri?
Ya mere, ọ bụrụ na ọ bụghị eziokwu na ọ na-arịọ maka ọtụtụ ikikere, aha nke post (M NA-agagharị: «ndepụta nke ikikere ikwubiga okwu ókè anyị na-enye WhatsApp») bụ, na nkọwa, ejighị n'aka (ma ọ bụ ụgha, ma ọ bụ Lgha , ihe obula ichoro ikpo ya).
Maka INRI ọzọ, ederede ederede sitere na ụfọdụ echiche na nkwenye ndị a na-ahụkarị nke neophyte zuru oke na sistemụ arụmọrụ karịa nke "nwere mmasị na sayensị kọmputa" (dị ka Francisco na-akọwapụta onwe ya na profaịlụ ederede ya).
Ọkụ ahụ nwedịrị ike ịdị mma, dabere na ụbọchị ma ọ bụ oge (ma ọ bụ dabere na isiokwu), mana na okwu ọkara, nsonaazụ ha na-enwetakarị bụ ihe megidere ihe achọrọ na enwere ibelata nleta (ndị mmadụ kwụsịrị ịtụkwasị obi , ha wepu aha ndenye aha ha nke rss, ma ọ bụ kwụsị ịpị njikọ ndị ahụ ma ọ bụrụ na ha si na blọgụ ahụ, maka mkpochapụ dị mfe).
Enweghị onye na - ede blọgụ dị egwu ga - anabata oku dịka isiokwu a na - anabata.
Na-ewere ajụjụ ahụ kpamkpam site na gburugburu, ihe niile m kwuru ma ọ bụ kọwaa ebe a bụ eziokwu kachasị dị ọcha ma na-enweghị ihe ọhụụ ọ bụla. M kwughachiri na ọ dịghị onye na-ekwenye WhatsApp na aha ọma ya, abụ m onye mbụ etinyere ya. Mana ị naghị eche na ọ bụ nnukwu mmụba nke okwukwe inye gị obi ike gị niile maka ụdị nke ụdị a na-ekwu na ha nwere nkwanye ùgwù na ezigbo ọrụ? You cheghị na ọ bụ ngafe nke obi ike na ọ gaghị enwe ebe maka nke ahụ ma ghara ikwe ka ngwa iji nwee ike ịme omume ndị ahụ ma ọ bụrụ na ọ chere na ọ kwesịrị ekwesị na-enweghị nkwenye anyị?
Maka ndị ọzọ, m na-ekwugharị na anaghị m eche na ọ na-emenye onye ọ bụla ụjọ ma ọ bụ na-emerụ WhatsApp, naanị m na-ezo aka n'eziokwu na ezigbo ikikere ọ chọrọ ma anyị nyere WhatsApp.
nke a yiri ka eji keygens ... ọ bụ n'efu na ihe niile dị mma, onye ọ bụla na-agbachitere ha wee sị mba, kedu ka ọ ga - esi ruo ... ruo otu ụbọchị ị ga - eme nyocha nke kọmpụta ma ị mata na ị nwere nje ndị ọzọ ewezuga ndị keygens ... na antivirus anaghịzi enye ezigbo agwa, nke a bụ otu ihe ahụ, maka ihe antivirus na - achọpụta ya dị ka nje, n'ihe gbasara android, maka ihe ọ na - ekwu N'AGBATA IKWETA gị, ma ọ bụghị na ọ gaghị ekwu na, maka ihe android antivirus dọrọ gị aka na ntị Somefọdụ ngwa na-etinye nzuzo gị n'ihe egwu, mana hey, ọ dịghị onye chọrọ ịnakwere ya, ebe ọ bụ na ọ bụghị akpa ha maka oge a, ha niile na-atụgharị megide isiokwu dịka nke a, ekele Franke
Ezigbo Manuel, echere m na ọ na-ajụ oke ikikere ma e jiri ya tụnyere ngwa ndị ọzọ. N’ezie, ọ dị mma ma ọ bụrụ na ndị ị na-arịọ bụ ndị ị na-eji.
Francisco ị na-ekwu na ị naghị atụle na ị na-emenye onye ọ bụla ụjọ ... Naanị aha ahụ na-ahapụ ahụ ọjọọ.
Na-enweghị ịga n'ihu, edere m ọtụtụ oge banyere WhatsApp na weebụsaịtị m, ọ bụghị ngwa nke m nwere nnukwu nkwanye ùgwù, mana ihe ọ na-eme, ọ na-eme na nkwenye nke onye ọrụ bụ onye na-akpọ na onye na-eziga sms (akwụ ụgwọ).
Ihe ọ bụla ọ na-eme internally, anyị ga-ekwere ihe WhatsApp inc na-ekwu dị ka dum onwe eluigwe na ala.
Site n'ụzọ, ọbụlagodi na ịnwere ikikere iji see foto, ọ bụghị iwu na-akwadoghị ịme foto nke onye ọrụ na-enweghị nkwenye ha? (ahịrịokwu na-acha uhie uhie)
Banyere ụzọ e si ede edemede ahụ ọ bụghị ọdịnaya. M na-amụ nkwukọrịta okwu, ebe enwere isiokwu bụ akwụkwọ akụkọ na otu esi ede akụkọ na ederede ndị ọzọ. Mgbe ị na-ekwu, dịka ọmụmaatụ, "ị ghọtaghị isiokwu ahụ ma ọ bụ na ị gụrụ naanị ihe masịrị gị", onye ndezi ga-eme akụkọ, mkpesa, nyocha ma ọ bụ ihe ọ bụla doro anya dịka o kwere mee. Ọ bụrụ na onye na - agụ ya “aghotaghị” ya, ọ bụ onye editọ ahụ mejọrọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ itinye WhatsApp iji dọta uche karịa nke ndị ọzọ ha na-enye gị, emela mkpesa ma ọ bụrụ na aghọtaghị ya dịka ịchọrọ, n'ihi na m kwughachiri, mmejọ ahụ abụghị onye na-agụ ya na 95% nke ikpe ahụ.
Echere m na ederede ederede nke ọma ebe ọ bụ na site na echiche nke Vulnerability nsogbu bụ na site na ọtụtụ ikikere nke WhatsApp nwere, onye ọ bụla nwere opekempe nke ihe ọmụma na Development nwere ike iji nke a wee mepụta ụzọ azụ iji chịkwaa ngwaọrụ ahụ disestra ma ọ bụ ajọ. Echere m na ọ ga-aka mma ịbụ nsogbu nke gam akporo nwere site n'inye ọtụtụ ikike na ngwa ahụ. Ekwuru m na ọtụtụ anaghị ebudata ngwa amaghi ama ma ọ bụ ihe ọ bụla ha hụrụ ebe ahụ. Mana ọ bụrụ na ọtụtụ n’ime gị dị ka ndị aghụghọ n’egwuregwu na ngwa ndị a gbanwere agbanwe amaghị onye kere ha n’ụzọ e si kee ha, ha enweghị asambodo Google ma ọ bụ mgbe ahụ ka sistemụ ahụ ga-esi nye nsogbu. Ekwenyesiri m ike na WhatsApp + tinyere onye kere ya ga-enwerịrị na nchekwa data ọnụ ọgụgụ na foto nke onye ọ bụla na-eji ngwa a, enwere m ike ịga n'ihu ma nwee nyocha maka foto ebe tupu ya erute ihe nkesa site na WhatsApp, gafee ụfọdụ nke gi ma daba n'ihe oyiyi ndi a. Ihe niile kwere omume mana anyị ga-akpachara anya maka ihe anyị rụnyere na ekwentị anyị ma ọ bụ.
Nke ahụ dị ezigbo mma, mana edemede ahụ anaghị ekwu maka nke ahụ, ọ naghị ekwu maka ikikere na ngwa ahụ, ọ naghị ekwu maka ngwa enwetara site na ụzọ ndị ọzọ karịa ụlọ ahịa egwu na ihe egwu ha na-etinye ... na-ekwu «WhatsApp O nwere ọtụtụ ikike na anyị amaghị ihe ha na ha na-eme.” Ọ na-echekwa ihe ọ chọrọ ha, mgbe anyị meworo ka ọ doo anya ihe ha chọrọ ha.
N'inye gị ka ị chee otu ahụ, gam akporo nwere ikikere niile, ma ọ bụrụ na echi, Google kpebiri izu nọmba nọmba kaadị gị, ọ ga-eme ya, dịka WhatsApp ga-arara onwe ya nye ịgbasa foto ụmụ gị site na ozi, ma ọ bụ facebook ga fanye nkọwa ịkpa ókè agbụrụ n'aha gị na mgbidi ndị enyi gị. Maka iche na ị na-akpaghasị uche, hapụ ya.
Gụ nkọwa ndị ahụ, ebumnuche nke isiokwu ahụ nwere ike ịdị mma, mana ọ nọgidere na nke ahụ, mmepe ya bụ ọdachi. M na-agụ blọọgụ gam akporo / ozi ọma / wdg kwa ụbọchị (ọ bụ ọrụ m), ọ dịbeghịkwa mgbe m ghọtara karịa ebumnuche ịmepụta egwu (ezighi ezi), megide ngwa a kapịrị ọnụ (na-enweghị ntọala)
Francisco, ị ka siri isi ike n’ihe na-enweghị ihe jikọrọ ya na ya.
Gam akporo, na nke a, na-enye nghọta na nkọwa nke ozi ndị ọzọ sistemụ arụmọrụ (iOS, Windows ma ọ bụ Linux) anaghị enye. You mara ihe akụrụngwa dị na kọmputa gị (netwọkụ, diski, Photoshop ma ọ bụ Office nwere ike ịnweta? (Ana m agwa gị: ihe niile).
Na nke a, gam akporo na-adọ gị aka ná ntị. Nke ahụ dị mma. Ma anyị abụọ (site na onyinye anyị na Google Play rating na comments) na Google n'onwe ya (site na njikwa nke ngwa ndị a) bụ ndị na-achịkwa ntinye nke ngwa ọjọọ.
Usoro ikike nke gam akporo dị iji gwa anyị, ọ bụghị iji kpughee anyị. Ọ bụ ihe kachasị mma n'ụwa maka WhatsApp ịnwe ikikere iji nweta igwefoto na-enweghị ikike anyị pụrụ iche (echere na anyị na-enye ha ya mgbe anyị gosipụtara na anyị chọrọ iziga foto were igwefoto). Otu ihe ahụ iji chekwaa vidiyo ha zitere anyị. Cheedị otú ọ ga-esi na-agwụ ike ma ọ bụrụ na oge ọ bụla ịchọrọ ime ihe, ị ga-ajụrịrị anyị maka ikike (n'etiti ihe ndị ọzọ, ị nweghị ike ịkọrịta).
Mana anyị na-apụ apụ. Okwu banyere mkpesa ndị ahụ kwuru bụ (ọbụlagodi ọtụtụ ndị iro WhatsApp siri ike dịka m), gosipụtara na Roman Paladino, na isiokwu ahụ na-ekwu okwu ọjọọ banyere WhatsApp n'ihi ikike ya; na ikikere ndị a dị mma maka njirimara nke mmemme ahụ na-enye nakwa na ọ bụrụ na, dị ka onye edemede na-ekwusi ike na ikwugharị, isiokwu ahụ bụ banyere nchekwa na gam akporo, ọ dịghị onye ghọtara ya, ihe kpatara ya bụ ndị na-agụ ya bụ ndị nzuzu n'ihi na anyị aghọtaghị ya ... ọ ga-abụrịrị na anyị enweghị ike ịgụ n'etiti ahịrị na ebe ọ na-ekwu "ndepụta nke ikikere ikwubiga okwu ókè anyị na-enye WhatsApp" pụtara "ole ikikere nke ngwa android rịọrọ, gee ntị", mana myopia anaghị ekwe anyị iji hu ezi ihe ode akwukwo n’enye gi. (izu!)
Lee anya na m kpọrọ WhatsApp asị (ewepụrụ m ya karịa otu afọ gara aga maka ọtụtụ ebumnuche na m na-eji EZIOKWU kama) mana isiokwu a gafere. Naanị ihe na-efu iji kwụsị ịgụ blọgụ a, m na-ewepụ ya na RSS.
Hụ gị mgbe.
Mmelite kachasị ọhụrụ nke whattsap na android kwupụtara n'ụzọ doro anya, na ikike igwefoto: «na-enye ohere ngwa iji were foto ma ọ bụ dekọọ vidiyo na igwefoto. Ikike a nyere ikike iji igwefoto jiri oge ọ bụla na-enweghị ikike gị »
Ikpeazu a dị na-akparị m. Ọ bụghị na ngwa ahụ na-enweta igwefoto ma ọ bụ gallery ahụ ka ị nwee ike izipu foto. Mana ọ dị ka ngwa ahụ, ọ bụrụ na ọchọrọ, ga-enwe ike ịse gị foto n’amaghị ama. Maka m ngwa a kwesịrị ịkọwapụta ihe kpatara Google ji nye ikike a
Ka anyị hụ, anyị aghọtaghị ihe ndabere: ikikere gam akporo.
Ihe niile a na-ekwu maka "NA-ENWEGH YOUR IKWE" ... nkwenye gị bụ inye ngwa X ikike. Ozugbo ị nyere ikike ahụ ikike ahụ, n'ihi na ọ chọrọ ya, sistemụ ahụ (Android) enweghị ike ịmata ma ngwa ahụ na-ese foto n'ihi na ị nyere bọtịnụ ahụ, maọbụ ọ bụ n'ihi na emebere ya iji see foto. Nkeji 15 wee zipụ ya na email nke Obama.
Na android, ikwenye ma ọ bụ ghara ikwenye bụ inye ikikere ma ọ bụ ịghara inye ha. Google dọrọ aka na ntị, ma ọ bụrụ na ị kwenyeghị, ọ dị mfe dịka ịtinye ngwa ahụ. Ọ bụrụ na a rịọ nkwenye n'oge ọ bụla ejiri ikike, ekwentị mkpanaaka ahụ agaghị arụ ọrụ, n'ihi na anyị ga-eji ndụ anyị na-asị "Ee"
Ọ bụghị "na-enweghị ikike gị," ọ bụ "na-enweghị ikike gị." Nke bụkwa mmejọ. Na-enye ya ikike mgbe ị rụnyere ya. Dịka ngwa ọ bụla ị rụnyere na windo gị, ị na-enye ikike (ọbụlagodi na sistemụ arụmọrụ anaghị agwa gị) iji nweta kamera kamera gị ... ị maara ya, ma ọ bụ na ị maghị ya ... ọ na-adọ gị aka na ntị , ma ọ bụ ọ daghị gị aka ná ntị.
Nlekọta nke ngwa ga-agbadokwa dabere na sistemụ tụkwasịrị obi (atụkwasịrị m obi na ngwa a tụkwasịrị obi na ọ gaghị agbanye igwefoto n'onwe ya ma dekọọ m ka m nọ ọdụ mposi).
Ọ bụrụ n’ịchọpụta, Line, BBM, WeChat na Hangouts na-ejide otu ikike ahụ. Na KitKat gam akporo m, ọ na-ezo aka na ikike dịka "Kwe ka ngwa ahụ were foto ma ọ bụ dekọọ vidiyo na igwefoto. Ikike a nyere ikikere iji igwefoto ahụ n'oge ọ bụla na-enweghị nkwenye gị. Gụo nke ọma: NKWUKWU, nke na-abụghị otu Iwu. Chọọ ha n'akwụkwọ ọkọwa okwu ma ọ bụrụ na ị kwenyeghị m. 😉
Ọ dịghị mkpa ikwenye ikike enyerela (n'oge echichi).
Nakwa na ụfọdụ ndị ọzọ ọ nwere otu ikikere maka "Oku ekwentị" wee sị "Ọ na - enye ngwa ohere ịkpọ oku na - enweghị enyemaka ndị ọrụ, nke nwere ike ibute oku ma ọ bụ ebubo na-atụghị anya ya. Biko rịba ama na ngwa enweghị ike iji ọrụ a kpọọ nọmba mberede, mana ngwa ọjọọ nwere ike ibute gị mmefu a na-atụghị anya ya site na ịkpọ oku na-enweghị nkwenye gị.
Ma ọ bụ na, n'agbanyeghị ole anyị nyere ya, gam akporo dị na ozi US nke ikikere ndị a nke ngwa ahụ chọrọ (nke dịkarịrị ọtụtụ karịa ihe ndị ọzọ sistemụ arụmọrụ na-enye).
You na-esi ọnwụ na nke a tọrọ ntọala?
Na-anwa anwa gaba n’ihu na-agbachitere oke okwu nzuzu i tinyere?
You na-esi ọnwụ messing na ngwa kama nke android?
Ọ nwere onye ọ bụla na-ewepụta ihe n’ime ihe gbara ya gburugburu? Are bụ otu n’ime ndị na-ekwu na e nwere ụzọ abụọ esi ahụ ihe, nke m na-ahụ na nke ezighi ezi.
Ha enyela gị ezigbo ihe atụ.
Foto nke ngwa IOS kama android bụ ahịhịa ikpeazụ ...
M na-emesi gị obi ike na blog a enwekwaghị ndị na-agụ akwụkwọ taa.
Ọ bụ otu okwu ahụ, ọ bụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ngwa iji kwuo ihe ikikere ọ chọrọ, nke ọ na-eme na nke a na ibu ọrụ nke onye ọrụ ịgụ ya ma nakwere ya ma ọ bụrụ na ha ekwenye ma ọ bụ na ha ekwenyeghị. Ọ bụrụ na anyị bi n’otu obodo nke na-ebinye aka na nnabata ihe n’agụghị ya nkasi obi ma ọ bụ omume, njehie ahụ bụ nke ọha na eze. Nkasi obi na nzuzo abụghị ihe 2 dị na oge a.
Zaghachi ka rom3ox
Agụghị m ihe niile kwuru, mana ezuru iji hụ ebe agbapụ. Echere m na ha niile nwere obere ma ọ bụ ọtụtụ ihe kpatara (nke ndị ahụ gụrụ), yana Francisco, nwere otu ndọtị, ikikere nke WhatsApp jụrụ abụghị nsogbu gam akporo, ọ bụ nsogbu onye ọrụ, onye na-arịọ maka ikike ndị ahụ na-etinye. ya. Echere m na e nwere ọtụtụ ikpe ọbara, dị ka nke Facebook, maka mmelite 2 ma ọ bụ 3 emelitereghị m ya.
Ekwenyere m na Francisco mgbe ọ na-egosi na ikikere ndị a na-enye ya ike ịkpọ oku mgbe ọ bụla ọ chọrọ, eziokwu bụ na ọ naghị eji ya eme ihe (ọ ga-anọgide na log log system) mana ọ nwere ike.
Ndị na-ekwu na e nwere ọtụtụ ngwa ka mma dịkwa mma, n'eziokwu, n'echiche nke m, WhatsApp adịbeghị nso. O nweela oke ihu ọma ma ọ bụ nwee ọtụtụ anya, amaghị m
Anọla oge buru ibu na Francisco, ọ ghabeghị ụgha, naanị ịkọwa ntakịrị, ọ dịghị mkpa ịme ọbara, ọ bụrụ na ịchọọghị ka blog ya wepu ya n'aka onye ahịa RSS gị.
Zaghachi Oscar C.
Amaghị m ihe ọzọ dị mwute karị ma ọ bụrụ na isiokwu ahụ ma ọ bụ azịza gị.
N'oge na-adịbeghị anya ogo akwụkwọ gị na-agbada n'ụzọ dị egwu. Kedu ihe nzuzu.
Ọ dị nwute mana… Raara onwe gị nye ihe ọzọ… .. oge ọ bụla m gụrụ ya ọ ka njọ !!!!
Zaghachi na saịtị
Oké ozi ọma Francisco. Ejikwam na "freaking out" na ikike WhatsApp. Enweela m ike ịse foto na vidiyo site na WhatsApp ma ọ bụ nweta ha site na otu ngwa ahụ wee ziga ha na kọntaktị m. M na-emeghachi, ebe ọ bụ na mgbe niile. Ugbu a ọ tụgharịrị na na mmelite ọhụrụ ahụ, ha gbakwunye ikike nke na-ajụ ka ịse foto na vidiyo na-enweghị nkwenye onye ọrụ. Anaghị m ahụ ihe ezi omume maka nke ahụ ebe ọ bụ na enwere m ike ịse foto na vidiyo na naanị ihe m hụrụ na-agbakwunye na nke ahụ bụ ikike iji ikikere jiri nnabata na enweghị nkwenye. Onye ọ bụla na-eweso gị iwe dị ukwuu, dị ka o mere ndị gwara eziokwu banyere Google na ndị dị jụụ ugbu a n'okwu banyere ọnụ ụzọ azụ ha hapụrụ maka nledo. Agaghị m ekwu ihe ọ bụla ọzọ. Daalụ maka ịkekọrịta nke a. Ma ndị mmadụ kwenyere na gị ma ọ bụ na ha ekwenyeghị, naanị iji gbalịa ime ka a mata ihe egwu ndị ikike ndị a nwere ike ịnwe, enweelarị ekele maka ya. Daalụ!
O nweghi ukwu ma obu isi ma odi ka otutu kwuru otutu amaghi otu esi enye ikike nke gam akporo. Ọ bụrụ na e meela isiokwu ahụ dị ka nkatọ nke usoro ikike gam akporo, m ga-aghọta ya mana ọ bụghị megide otu ngwa ọ bụla chọrọ ikikere ndị ahụ iji rụọ ọrụ na nke ahụ anaghị eme ya na-enweghị nkwenye gị ebe ọ jụrụ gị mgbe ị wụnye ya ma ị nabata ma ọ bụ - dịka ngwa ọ bụla ọzọ. Ihe WhatsApp abụghị ngwa kachasị nchebe n'ụwa n'ihi ihe ndị ọzọ metụtara ihe a kọwara ebe a bụ otu ihe mana ihe a na-ekwu maka ebe a enweghị isi. Okwu nzuzu nke obi ike.
Ọ bụrụ na WhatsApp nwere onwe ya ma gbasaa ya, ihe a niile agaraghị eme ndị okenye. Na-eche! Na ọ dị adị! Jiri JABBER NA ịhapụ nke ukwuu $ $ APP !!
Zaghachi Alberto Aru
Ọfọn ... na-agagharị na lookingntanetị na-achọ ozi ndị ọzọ, abịawo m ebe a. Abụghị m onye nrụpụta, ma ọ bụ ọkachamara gam akporo. Enwere m mobiles m na mbadamba m "gbanyere mkpọrọgwụ", yabụ ana m achịkwa ikikere ya na nna ukwu nchekwa LBE ebe ọ bụ na ahụrụ m ọnwa ole na ole gara aga na ụfọdụ ngwa na-arịọ maka ikikere ruo ugbu a ha achọghị. Aghọtara m ihe niile ekwurula maka ya, m na-eji nhọrọ "jụọ". Maka na ọ dịkarịa ala, ọ ga-ajụ m mgbe ọ chọrọ ya.
Ihe m na-aghọtaghị bụ mkpa, ịkpọ aha; ndi di iche iche "Angry Bird", n'usoro inye ikike ebe. Ya mere enwere m ike ịkọwa ole na ole. Achọghị m ịrụ ụka, mana dị ka ha na-ekwu, "Otu n'ime wayo na nke ọzọ nke ájá."
Agam aza gi tupu onye ndezi (anam atu anya) na igaghi edughari ya him. : p
Ngwa a na - akwụ ụgwọ na - ajụkarị maka ikike a ka ọkwalite mgbasa ozi ọkọlọtọ site na igosipụta nsonaazụ sitere na ọnọdụ. Daalụ
Ọfọn ... maka ịdenye aha, anatara m ozi gị Carlos. Daalụ, adabaghị m na nkọwa ahụ nke gbanwere bụrụ ezigbo nkọwa n'ihi na ngwa nwere ikikere "Ọnọdụ" ahụ. Nke ahụ kwa, ụfọdụ, ga-akọwa ihe kpatara na ngwa ndị ọzọ nwere ikikere ụfọdụ ndị anaghị adị na mbụ; ha ga-enwe ọrụ ọhụrụ.
Zingtụnanya. Echere m mgbe niile na nchebe nke a na-ewere maka isiokwu nke data onwe onye; ọ dị obere ma nke a na-akwado ya. Agbanyeghị, e reelarị anyị.
Echere m na otu ihe ahụ dị ka "ree", m na-ajụ onwe m otu ajụjụ ahụ, gịnị kpatara ha ji chọọ ikikere ọhụrụ ndị a ugbu a ma ọ bụrụ na tupu anyị arụ ọrụ zuru oke na-enweghị ha, ma karịa ihe niile, olee otu ha nwere ike isi banye n'oge ọ bụla? Ha ga-enweta ọbụlagodi mgbe anyị anaghị eji WhatsApp? Ndị mmepe WhatsApp ekwesịghị ichegbu onwe ha, ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ nde mmadụ ndị ga-emelite na-akpaghị aka, na-enweghị ajụjụ, mgbe ahụ anyị bụ ndị nyocha ole na ole nwere mkpịsị aka (?) Na anyị ga-eme nyocha na arụmụka niile anyị chọrọ tupu «banye '. ikikere oke ikwenye. Akụkọ ahụ masịrị m, karịsịa n'ihi na ọ na-ekpughe ọtụtụ nde ndị iberibe na-amaghịdị ihe bụ́ ikike. Ndị ahụ bụ ndị na-emeghe egwuregwu nye ndị na-eji data anyị na ebumnuche ọjọọ, ọ bụ ezie na WhatsApp abụghị okwu ahụ, ọbụlagodi ma.
Enweela m ikikere igwefoto ọhụrụ tupu
N'ikpeazụ melite ngwa ahụ. Ugbu a ka m ghọtara mgbanwe. Ugbu a n'ime ngwa ahụ n'onwe ya, enwere nhọrọ mgbakwunye na akara ngosi foto ma ọ bụ vidiyo ma nke a were foto ma ọ bụ vidiyo ma zipụ ya ozugbo.
Tupu, ị ga-eji ngwa igwefoto, see foto ma kesaa ya na WS, yana kọntaktị ịchọrọ. Yabụ na nke a kọwara mkpa maka ikike. Ikekwe na-enweghị wụnye mmelite ọhụrụ ikike nke igwefoto bụ nnọọ ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ ma otu oge arụnyere ọ dị m ka ọ dịkarịa ala na o nwere ihe ziri ezi. Ihe ọzọ bụ na ha na-eji ikike eme ihe n'ụzọ na-adịghị mma nke m na-echeghị
Nhazi weebụ dijo
Edemede dị mma, ọ bụ naanị ihe m na-achọ, a ghaghi iburu ya n'uche maka nchekwa anyị.
Zaghachi imewe weebụ
mmetụta nke ụwa m dijo
Ekwenyesiri m ike ... ọ bụ usoro nke ikikere na-enweghị isi na-eme ihe nzuzo nke onye ọrụ yana ngọpụ nke ijikwa ...
Ikike iji nyochaa akụkọ dịka ọmụmaatụ? Enweghị uche.
Ikike ịchọpụta ngwa ndị ọzọ? Maka nzube dị a ?aa? Naanị ị na-egwupụta data, ka anyị nọdụ na nzuzo ọzọ ... yana ogologo wdg.
O di nwute na nzuzo bu nsogbu di otutu nke otutu ndi oru n’ile na otutu ndi na ede ebe a dika ha echefuola ma obu amaghi, ezigbo ihe ihere !!!
Kedu ikikere ndị rụrụ? Kedu windo na ihe ndị ọzọ? HA! Nwere ike nweta nche na nzuzo na Windows na ihe ndị ọzọ ... na gam akporo ọ gwụla ma ị bụ mgbọrọgwụ na ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ngwa anaghị ejikwa ime ikike ọ naghị arụ ọrụ.
Google kwesiri ka o di njọ na nke a ma nyochaa ezigbo ikikere achọrọ nke ngwa tupu ikwe ka mbipụta ha.
Ekele na isiokwu ahụ.
Zaghachi mmetụta nke ụwa m
Francisco Ruiz zuru oke. Abụ m onye mmemme, na ihe kwesịrị ime bụ na oge ọ bụla WhatsApp dị ka ngwa ọ bụla ọzọ nke gam akporo chọrọ ime ihe n'onwe ya, sistemụ arụmọrụ nke android kwesịrị ijikọta ọrụ ahụ ma jụọ onye ọrụ mkpanaka maka nkwenye. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka m ghara ịjụ gị ọzọ, otu windo ahụ nwere ike inwe akara iji ghara ịjụ ọzọ. N'ụzọ ahụ, ịnwere ike ịnye akwụkwọ anamachọihe ahụ oge ị na-eji ya, ma ghara inye gị ikike ịme ihe n'onwe gị n'oge ọ bụla n'amaghị ihe ọ na-eme. Mana otu ihe si dị, enweghi ike iji ụfọdụ ngwa gam akporo, na-ebuteghị obere ọkpa gị ma tụkwasị obi na ha agaghị enye gị ịnyịnya ibu. Na mgbakwunye, ikikere ahụ na nchịkọta! Echere m, ọ naghị ahapụ gị ịhọrọ nke a, ee, na ee e. Simply nabatara ya ma ọ bụ na ị naghị eji ya. Nke a gbanwere naanị otu ụzọ: ị ga-amalite ịjụ ngwa nke ụdị a ma nye ndị nwere ihe kwesịrị ekwesị maka ikike ikike. Gam akporo folks kwesịrị ọzọ na-eche nche… Ọ bụghị Linux mgbe niile ka onye na-eweli nche ọkọlọtọ mbụ mgbe Windows mere mmiri na nke a?… Ma ọ bụ ya nche dabere na ịbụ nchebe n'ihi na ọ nwere ọtụtụ ọrụ? Ọ nwere ike ichebe gị ịnweta akụkụ ụfọdụ ọbụlagodi mgbe anyị nyere ikike na ngwa ahụ, ọ naghị eme ya.
Mkparịta ụka facebook na-enyocha oge ị gbanyere na ihuenyo, nchọgharị weebụ na ihe niile ọ nwere ike dịka ọmụmaatụ. Mgbe ị na-etinye ngwa ndị ahụ, ọ na-ajụ gị ma ịchọrọ ịwụnye ya na ihe na-abụghị ihe pụrụ iche nke WhatsApp. Onweghi onye na-agbachitere ihe a na-ekwenye na ikikere mkparị nke ngwa a ma ọ bụ ndị ọzọ, a na-ekwu na isiokwu ahụ na-elekwasị anya na ntinye akwụkwọ mgbe ha niile ...
Ezigbo post, Francisco, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe m na-achọ. Ọbụna m ga-ekwukwa na ọ bụ ụzọ tupu oge gị, nke na-eme ka o sie ike igwu egwu ihe a na-akpọ "mmemme ụbụrụ". Enweghi ike iwepu nke a ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ bara uru, amaja m ịkọ oge nke ihe niile, ngwa niile na-agafe na ntanetị ga-ejikwa ya mee ihe. Anyị maara na anyị chọrọ ha ịnweta ọrụ dị anyị mkpa ma, na n'aka nke ha, nye ha ike iji rụọ ọrụ nke ọma. Dabere na nke a ma dị elu karịa ntụkwasị obi ma ọ bụ na ọ bụghị nke sistemụ arụmọrụ nke ọ na-agba ọsọ: Kedu ihe dị mma karịa ịnweta ọnụọgụ ọnụọgụ kachasị ukwuu? Na m na-eche ebe bụ njedebe nke ọwara? . Taa, anyị ka na-ahụ na ha bụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi, dịka ọ dị n'okwu a, mana m na-eche ihe ọ ga-abụ na onye ga-eweta oke? Ọ dị mma ma dịkwa mma ịjụ onwe anyị ajụjụ a ma nwee enyo bido taa. Dịka ị nwere ike ịchọpụta, anọghị m n'ime na kọmputa, mana echela maka ihichapụ post a, n'ihi na otu ụbọchị ị ga-enwe ike ịgwa mmadụ niile: Agwara m gị, ma ị kwenyeghị m!
Fewbọchị ole na ole gara aga whatsapp malitere ịgwa m banyere mmelite dị mkpa na ngụkọta nke ụbọchị 10, mgbe m na-agbalị imelite ihe ịtụnanya m bụ ọnụọgụ nke ikike arịrịọ, Abụghị m otu n'ime ndị na-ede foto ha na ndụ ha na netwọkụ, o kweghikwa ka a mata kọntaktị gị.
Enwere m Note2 na 4.4.2 ditto ma arụnyere m ngwa opps Starter, nke na-enye ohere igbochi ikikere.
Nwelite ohuru a na-arịọ ikikere iji zipu nnata sms / mms (Aghọtara m na ị jiri ya debanye aha oge mbụ) mana ọ dị m ka ha na-eme.
Ikike iji nweta ịzụrụ ihe, akụkọ arụnyere arụnyere, akụkọ nchọgharị, ibe edokọbara na akụkọ ihe mere eme nke ngwaọrụ. Ọ dị m ka nke a adịghị mkpa.
Winweta data Wi-Fi na ngwaọrụ ndị ejikọrọ na ya.
(Ọ dịghị mkpa ma).
Foto na faịlụ dị iche iche, na folda na ngwaọrụ ndị dị na mpụga.
(N'uche nke m, ọ bụrụ na ịchọrọ izipu onyonyo, sistemụ ahụ kwesịrị ịgwa onye ọrụ nke nnweta ahụ, ma hapụ ya naanị n'oge ahụ).
Ọ baghị uru ikwu, echeghị m imelite rue mgbe nke a gbanwere, enwere m ike ibi na enweghị whatsapp.
N'uche m ọ bụ ihe ihere, google ekwesịghịkwa ikwe ka ya.
onye ozo wassap gafere, ha kwesiri iju ajuju akauntu gi
Obi ike Francisco, ana m ekele gị maka edemede a. Ọtụtụ "ndị isi" nke WhatsApp ịkagbu, ha na-ana ya? Ekwenyere m dị ka gị na Carlos na ndị ọzọ, na ọ dịghị mkpa iji nweta ikike ndị ahụ.
Enwekwara m Wassap ụnyaahụ n'ihi na dị ka enyi m Carlos na-ekwu gburugburu ebe a, enweghị m ike ịkọwa ikikere ndị a "Ikike iji nweta ịzụrụ ihe, akụkọ ihe mere eme nke ngwa arụnyere, akụkọ nchọgharị, akara edokọbara na akụkọ ihe mere eme nke ngwaọrụ"
Maka ihe hell ị chọrọ ịhụ ebe m ga-esi na ịntanetị ma ọ bụ ihe m na-eme na ngwaọrụ m, ọ dịghị mkpa na ọrụ nke mmemme ahụ na m ga-agwa gị otu ihe, ndị enyi mmemme, na gị ọrụ ụkpụrụ omume enweghị ihe o mere ma ọ bụ ihe ọ bụla, ya bụ, ọ bụrụ na Echi ị ga-enweta ngwa na-anakọta akaụntụ akụ iji kpuchie onwe gị, ị ga-eme ya n'enweghị obi abụọ ọ bụla.
Kpọọ m onye nkata ma agaghị m etinyere ngwa ma ọ bụ paireti ngwa maka Windows, n'ihi na anaghị m atụkwasị onwe m obi, anaghị m atụkwasị Microsoft obi nke ị chere na mmemme niile ndị paireti tọpụ na net.
Apụpụla m na WhatsApp, ikikere ọ na-ajụ gị ka ị ziga ozi ole na ole dị ịtụnanya, nke ahụ na-atụ ụjọ, m na-ahọrọ iji sms m na-akwụ ụgwọ karịa ka m na-achịkwa ha =).
Kpọmkwem, ọ tụrụ m n'anya site na ikikere nke WhatsApp chọrọ mgbe ọ na-emelite, (nke m na-ahọrọ ịbụ naanị izi ozi, dịka ọ dị na mbụ, ọ bụrụ na nke ahụ na-ezere ịnakwere ọtụtụ okwu) ma anyị na-eru ebe onye ahụ, na-enweghị anyị na-amata ya, na dị iche iche ngọpụ, na-ere anyị nzuzo anyị. Nke ahụ bụ nzube ya, ọ nweghịkwa onye ìsì ka njọ karịa onye na-achọghị ịhụ ụzọ. Ndị mgbasa ozi, gụnyere thentanetị, bụ ngwá ọrụ zuru oke iji mee ka anyị chịkwaa ebe ọ bụla n'ụwa. Onweghi ihe ọzọ ị ga-ahụ nledo nke NSA rụrụ. Ndị na-agba ọsọ na ndị na-ege ntị na-arụ ọrụ na NSA you chere na nke a bụ eziokwu? Kedu ihe ha anaghị anwa inyocha anyị? Naanị ị ga-ege ntị, lelee ma hụ otu ha si achịkwa kwa ụbọchị iji nakọta ozi ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ejiri WiFi netwọk niile ozi TV, PC na Smartphone jikọọ !! Ha maara ihe masịrị anyị niile, peeji ndị a na-agakarị, ọwa TV ma ọ bụ mmemme elere anya, ịzụta, egwuregwu, egwu ebudatara, wdg. Companieslọ ọrụ na-enyocha anyị, ha na-agbaso anyị iji mata mmasị anyị na-eri site na ihe nchọgharị anyị, gụnyere Facebook, Google na Microsoft. Ì chere na Maapụ Google ma ọ bụ Nnụnnụ Anglị enweghị nzube dị iche iche, ma ọ bụ kamera kamera dị mfe? Kedu ihe ịchọrọ igwefoto n'ihu? Ọhụhụ ọ dị mma nye ndị nledo gị? Olee otú ha jikwaa! Eziokwu? Have nwere ngwa na ekwentị gị na ọ bụrụ na ị naghị elezi anya ma ị kwụsị ya, mgbe ị na-ekwu okwu na Facebook, ọnọdụ gị pụtara, mgbe m kwuru ya, ọ ga-aga n'okporo ámá ebe ị nọ! Onye a na-ekwu maka ya amaghịdị ya! Ha tinyere iwu nke inye njirimara anyị site na nọmba ekwentị anyị, ma ọ bụghị na ọ ga-apụ n'anya. Ha na-agbali ichikota ozi anyi niile !! Ma ị ka chere na ọ bụ ndabakọ? Nụla banyere World World Order? Dertù Bilderberg? Ọ bụ ihe na-abaghị uru ịmara ọtụtụ ihe banyere teknụzụ ma ọ bụ mmemme ma ọ bụrụ na ị tụkwasịghị ha obi. Ha anaghị eme ihe ọ bụla na ndapụta ma ọ bụ maka ihe kpatara ya, ihe niile nwere ihe kpatara ya, ebumnuche, na maka ndị mụ anya, anyị amatalarị ihe ọ bụ. Maka ndị na-akatọ edemede ahụ, gwa ha ka ha ghara iji nlezianya na nyocha, onye ọ bụla ga-asị na ha nọ na ụlọ ọrụ ahụ ma ọ bụ na ha na-ewere ọrụ. Nke ahụ jọgburu onwe ya !!
Izu ọjọọ dijo
N'ezie, ha na-eji data anyị eme mgbasa ozi ezubere iche ma nweta ego.
Ma ọ bụ gịnị ka ị chere? Gmail ahụ si n’eluigwe daa? Sava Facebook ahụ na-eto na ala dị ka poteto?
Have nwere aha ezoro ezo, ọrụ ezoro ezo nke anaghị eji data gị ma ọlị, na-akwụ ụgwọ dị ala. Ah, mba, na Intaneti aghaghi ibu n'efu.
Anyị chọrọ ya niile, na n'efu. Kedu ihe efu xD
N'ikpeazụ, onye nwere nkwekọrịta ... niile nke na-akatọ WhatsApp maka ikikere, ị na-eme otu ihe ahụ na ọrụ google? gmail na-agụ ozi ịntanetị iji nye gị mgbasa ozi dịka ihe masịrị gị, nyocha na-adabere na profaịlụ gị, nyocha ndị gara aga wdg ... Google dị mma na WhatsApp / facebook ọjọọ? Ihe niile gbasara ya na eziokwu kwesiri inwe onwe ya ...
Nke ahụ bụ ebe ihe ahụ na-aga mana ha ga-aghọta na ọ bụghị whatsapp ma ọ bụ google, ebe ọ bụ na ị na-eji kọmputa iji kwurịta okwu, ma ọ bụ mkpanaka ma ọ bụ na ọ bụghị, ozi gị na-emebi, naanị ihe dị iche bụ na ị na-eji ngwa ị zigara ha ozi ahụ niile mgbe site na nke ọzọ N’ụzọ dị otu a, ha bụ ndị ga-anakọta ma hazie ozi niile site na ndekọ olu, ọbụlagodi mkpịsị aka mkpịsị aka, enwere igwe eserese nchekwa n’ọtụtụ saịtị na-emekọrịta na ngwanrọ nchọpụta njirimara nke onye a ma ama n’anya nke Chineke Hacker bụ. n'ezie na ọtụtụ ha na-ajụ ikwere dị ka mgbe anyị hụrụ James Bond na-ese foto na ekwentị. Ọ dị mma? Nke ahụ ezighi ezi? Ọ dabere n'ụzọ ị si ahụ ụwa, mkpa ịmara ihe niile gbasara onye ọ bụla bụ na a na-ekerịta ihe ọmụma ngwa ngwa yana ọtụtụ mmadụ ekele maka teknụzụ na-emepe obere ihe n'ime otu afọ nke ga-ewe ọtụtụ narị afọ gara aga anyị maara nke ọma, mmepe ndị a Ha ga-eweta nnukwu mgbanwe na mmadụ, mana n'ihi ọdịdị mmadụ, ikekwe oke ọganihu ga-abụ ihe na-adịghị mma.
Ihe dịka ya mgbe ha gbalịrị ịkwụsị ịgba ohu, ihe m na-ekwu bụ na ha gbalịrị n'ihi na ha gbanwere ụtarị maka iwu, nri maka akwụkwọ ego na agbụ maka ekwentị mkpanaaka.
kpam kpam na-ekwenye na «Edurne» .. dịka ọmụmaatụ .. enwere egwuregwu ndị chọrọ ịnweta foto na ọdịnaya multimedia .. ọ bụrụ na ọ bụ egwuregwu na-achọghị ka izipu foto .. gịnị kpatara ị ji chọọ nnweta site na igwefoto m na igwe okwu m ?? .. Ọ bụ egwuregwu ... Enweghị m ịkpọ oku ma ọ bụ see foto ... ya mere ... enwere ọtụtụ ngwa na-arịọ maka nke a, gụnyere WhatsApp na ee ... otu na-eziga ọdịyo .. foto .. na ndi ozo .. mana !! .. ha chere na nke ahu abughi Ha ga eji ya me ihe abuo ?? .. bia !!! .. anyi bu ndi mmadu ugbua .. n'ihi na facebook zutara WhatsApp ???… n'ihi ozi a na-agbanapu na ngwa a .. ya na facebook na WhatsApp otutu ndi mmadu na ekwurita okwu .. ya na onye na achota ihe ha ma ugbua ka esi soro gi ma odi nma .. gini mere na-aga n'ihu !! .. ọ dịghị ihe dị njọ karịa onye na-eme ya. achọghị ịhụ! ..
Gwa ezi okwu borregomatrix ha gha ewe iwe. Ngwa ndị ahụ nwere ike iji igwefoto gị, igwe okwu, ọnọdụ, gee ntị n'okwu gị, lee foto gị, adreesị, ihu ndị enyi, wdg, wdg, wdg. Ọ bụ ihe ọchị dị ukwuu na ha na-ewe iwe ma ha ekwenyeghi na ya. Nke m, debe ya. O nweghị onye kpuru ìsì ka onye na-achọghị ịhụ ụzọ. Ha na-skewered ka isi na-etinye isi ha n'ime ala dị ka enyí nnụnụ, Olee ihe nzuzu anyị changumanos mgbe ụfọdụ. Daalụ.
Zaghachi Rusticiano Treveré
Anyị kwesịrị iwepụ obere oge maka ihe ndị a wee bido ileba anya n'ihe anyị nwere n'ezie.
Ọ bụ sistemụ arụmọrụ ekwentị ga-egbochi ma rịọ ikike maka ịnweta ụfọdụ ihe (ọ bụ android, windo mkpanaka, iOS, ma ọ bụ linux ọ bụla ọzọ ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ ekwentị). Ihe dịka njikwa nke ndị ọrụ na windo, ma ọ bụ arịrịọ maka paswọọdụ mgbọrọgwụ (onye nchịkwa) na Linux, na sistemụ arụmọrụ kọmputa. Gam akporo anaghị achịkwa nche a n'ihi na ọ bụ nke Google, nke bụ onye mbụ nwere mmasị ịnwe ohere ịnweta ozi nzuzo. Achọrọ m inweta android na ekwentị m ma tinye Ubuntu maka mkpanaka.
bah, enwere ndị na-aghọtaghị isiokwu…. Ihe kachasị mkpa bụ nnyefe data, ya onwe ya (ndabere data) nke ahụ bụ mmekọrịta nke ngwa arụnyere ... ọ dịghị mgbe ha doziri nnyefe data nke ngwa ọ bụla na-eme ma ọ bụ ego Mb nke ụfọdụ ngwa na-eziga na-enweghị nkọwa. M nyochaa na m nwere ike ikwu na WhatsApp mgbe ịmalite data okporo ụzọ ma ọ bụ njikọ Wi-Fi, mgbe ụfọdụ na-eziga gburugburu 30 Mb nke ozi mkpanaka. (na-enweghị nkwenye) ma na-enyocha ihe ị zigara nke ọma ... ọ ga-abụ ozi sitere na ọchụchọ na ihe nchọgharị ahụ, akwụkwọ ịkpọtụrụ, ozi ederede, na foto echekwara na ebe nchekwa. nke ahụ bụ ihe na-enye nsogbu. Maka na amaghi ebum n’uche na ebe o na anuko ozi nile.
Ikwu okwu na post Dario: Enwere m ike itinye okwu ọhụụ mana ekwenyere m 100 × 100 na gị. Ndepụta nke ikikere ị nyere bụ ngụkọta. Maghị ihe ha chọrọ iji ya mee. Ọ bụghị gị na mmadụ dara ogbenye karị ka enwere oke ụlọ. Ọ bụghị nke ahụ. Ọ bụ Iwu nke Ọnụ Ọgụgụ. Ma ọ dịkarịa ala, isiokwu ahụ na-egosi m ya, abụghị m onye mgbakọ na mwepụ na amaghị m ihe ọ bụ. Mana naanị asụsụ bụ ihe doro anya. Naanị anyị na-enye nkụ. Kedu ka esi ekwu ya? Kedu ihe ị na-achọ? Ana m enye gị ya, n'ụzọ m, iji mee ka ị nwee obi ụtọ. Ọtụtụ n'ime ọrụ ndị a dị ka nke a, abụ m onye ofufe zuru oke na YouTube ma enwere m nzuzu banyere listi ọkpụkpọ ha na-agwa m. Dị mma.
Whatsapp ga-eme ihe na-abịa site n'ọnụ anyị niile ikikere. Ha dịkwa mma. Ha kpuchitere n'ụzọ iwu n'ihi na ha bụ ndị America ma ha ejighị ya kpọrọ ihe. Dị ka Airbnb, ikwu ihe kachasị.
Yabụ n'ime ime ihe niile, akọnuche nke onye ọ bụla na-ahapụ ha. Site n’aka onye anyị ga-ekwe ka anyị jikwaa? Naanị ihe ha chọrọ bụ ego, ọ ga-adị ha ka ọ bụ ndị mmeri n'ọgbọ egwuregwu circus!
Zaghachi nuria ribot
Ndị enyi m, achọrọ m enyemaka, onye nwere ike na-enweghị ikike m nwere ike itinye foto na ekwentị ha, jikọta ya na profaịlụ WhatsApp m yana na mgbe anyị na-akparịta ụka, foto a na-egosi dị ka profaịlụ m n'agbanyeghị na enweghị m mbipụta ọ bụla?
Zaghachi na Sọnde
Adrian Vale kwuru dijo
Ajuju adighi emeru! Ihe nye otutu mmadu dika ihe ezi uche di na ya, ndi ozo adighi nma, obu kwa ihe odidi nke mmadu ka ichoputa ihe kpatara ihe ndia na ihe ndi ozo! Nke a bụ ihe dị iche n'etiti ndị na - aghọ nnukwu ndị ndu na ndị na - ebi ndu ha niile ịbụ ndị na - eso ụzọ! naanị 5% nke ndị bi na ya bụ nnukwu ndị isi na ndị na-ahụ maka ikpebi etu ndị mmadụ kwesịrị isi kpaa ...
Zaghachi Adrian Vale
Zaghachi Jesus LE
Onyinye Bernardo Zapata dijo
Ahụrụ m post gị n'anya, ana m enye gị 10.
Ọ na-ewute m na ọtụtụ anaghị akwụsị iji nlezianya gụọ onyinye gị na-ajụghị ajụjụ ndị dị ka ma a na-ana ha ụgwọ ọnwa maka ịgbachitere ngwa.
M na-enye klaasị na klaasị ọ bụla nke otu dị iche iche m na-enye gị ọkwa, lelee ikikere nke ngwa ahụ chọrọ ka ọ rụọ ọrụ nke ọma ma kpachara anya maka ọdịnaya ị nwere na kọmputa gị yana ihe ị na-egosipụta mgbe ị na-esote kọmputa gị. Ọ bụ naanị ịdọ aka na ntị, ịmara na ịkpachara anya abụghị ya na amaghị ihe a na-ahụ anya.
Nwee obi ike, ezigbo ọrụ.
Zaghachi Deurys Bernardo Zapata
ARE B RR R KWES RR,, TAA WHASAPP Kpọrọ oku site na ekwentị m na-enweghị akwụkwọ nkwenye m ma ọ bụ ọbụlagodi ndekọ nke oku na-aga maka otu onye òtù ezinụlọ pụtara, nke a bụ ihere na nchegbu m ga-elekọta nke na-akọwa ọrụ ọkachamara na NETWORKS DANGERO.
Daalụ maka BLOG gị
Versiondị ọdịnihu nke gam akporo nwere ike "gbajie" ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa mgbọrọgwụ
Ibudata ma wụnye Apollo Music Player na gam akporo ọ bụla